Herinandron’ny teny frantsay sy ny frankofonia : Nomem-boninahitra manokana i Henri Ratsimbazafy
vendredi, 03 mars 2017 13:57
Anisan’ny hanamarika ny herinandron’ny frankofonia i Henry Ratsimbazafy izay mpanakanto malagasy manana ny maha izy azy. Izy no mpanakanto nosafidian’ny Alliance Française, noho izy manana hira maro amin’ny teny frantsay, toy ny J’aime les filles, Au zoma, Prend ma main na ihany koa Lamba Blanc izay tsy afaka am-bavan’ny maro.
Raha tsiahivina kely dia i Henry Ratsimbazafy no nahazo ny loka goavana nokarakarain’ny Centre Albert Camus izay fifaninanana hira amin’ny teny frantsay tamin’ny taona 1962, efa indroa nandrombaka izany izy.
Maro ireo hetsika karakarain’ny Alliance Française izay manomboka ny 13 martsa ka hatramin’ny 8 aprily 2017. Fampirantiana telo samihafa no hiseho mandritra ny fankalazana ny herinandron’ny teny frantsay sy ny frankofonia.
-Dis moi dix mots sur la toile, ahitana ireo teny folo miompana amin’ny teknolojian’ny aterineto.
-Cultures en confluences, miresaka ireo francofonina nanamarika sy anisan'ny nandrafitra ny tantaran’i Madagasikara.
-Fampirantiana ireo asa soratra, asa tanana ary horonan-tsary atolotr’ireo mpianatra mandray anjara amin’ny fifaninana momba ny "dix mots de la francophonie"